Ukuphupha iambrela Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Iphupha malunga neambrela. Uhlalutyo lweesimboli ezibonakala emaphupheni zibaluleke kakhulu kulwazi olungcono kuthi, kwesi sikhokelo sikunceda ukutolika amaphupha.
Iambrela yinto yorhwebo ekungafanelekanga ukuba ilahlekile kuyo nayiphi na ipokotho, ngakumbi kwimozulu eguqukayo. Ikhusela thina ekubeni simanzi xa kunetha kwaye isinika umthunzi xa ilanga libalele. Amaambrela anokufumaneka kuzo zonke izinto ezinokwenzeka. Nokuba ziiambrela zala maxesha okanye zakudala, ezimnyama okanye ezinemibala ngamachaphaza, ii-unicorn okanye izikwere, incasa yahlukile.
Kutoliko lamaphupha, "isambrela" isimboli yamaphupha inokuchazwa kumanqanaba amathathu. Rhoqo malunga nokhuselo nokhuseleko.
1 Uphawu lwephupha «isambrela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isambrela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isambrela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isambrela» - ukutolikwa ngokubanzi
Umfanekiso wephupha «isambrela» ikakhulu utoliko emaphupheni: uphawu lokhuselo. Ukuba uphupha iambrela yakho iyinto enkulu ngokungaqhelekanga, enyanisweni unokoyika ukuba ubomi bakho obuzolileyo obuzayo buya kulahlwa ngaphandle kwemali eseleyo ngenxa yokuphazamiseka kwangaphandle. Ngeambrela kwilizwe lakhe lamaphupha, uzama ukuzikhusela kwezi mpembelelo kwaye akhusele okubalulekileyo kuye.
Umbono weambrela emaphupheni ungabonisa ukuba umntu uza kurhoxa ngakumbi kwiziganeko zemihla ngemihla kwixa elizayo. Oku kunokuba yimfuneko kuba usenokuba namaxesha oxinzelelo kunye nokuphazamiseka. A ukurhoxa yindlela elungileyo yokufumana uxolo kunye nokuhlaziya iibhetri zakho.
"Isambrela" sinokwazisa umphuphi ukuba angathembela kwinkxaso yabanye kwiimeko zikaxakeka. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyenze eyakho indima ukufumana indlela yokuphuma kwesi sigaba sinzima. Ukuba uhlehla nje ngendlela ekhululekileyo kwaye uzibeke njengexhoba, ubeka emngciphekweni ukuvuma kwabanye ukunceda, kwaye ke ngenxa yoko usenokuba usiya ebubini.
Ukuba ulibale ukuthatha isambrela sakho ungene el mundo yamaphupha, oku kubhengeza amaxesha oxinzelelo ebomini bomntu ophuphayo. Ukuba ufumana iambrela njengesipho, kungekudala uza kufumana uncedo olungalindelekanga ngombandela onzima.
Uphawu lwephupha «isambrela» - ukutolikwa kwengqondo
Kutolikwe ngokwengqondo, isambrela siqulathe umnqweno wokhuseleko nokhuselo njengophawu lokulala. Kubomi bokwenyani, unokuziva usoyiswa yimeko okanye umntu kwaye uzive unesidingo sangaphakathi sokuzikhusela kuyo.
Ukuba uyayiqonda isambrela njengeambrela yaselwandle, kuya kufuneka uyiqonde le nto njengemfuneko yokuqaphela abantu abangenelelayo. Aba bantu amasela amandla apho umntu kufuneka azikhusele khona ngokupheleleyo.
Ukuba ungena phantsi kwesambrela ephupheni nabanye abantu kwaye wena ngokwakho uyisambrela, le meko yephupha yalatha ubuntu obunothando. Ebomini, uhlala ubona umsebenzi wakho ekukhathaleleni impilo-ntle yabanye kwaye ubanike imvakalelo yokukhuseleka kunye nokukhuseleka.
Ukuba umntu ufuna isambrela sakhe, oku kuthetha ukuba amandla ezesondo ephupha nawo alahlekile. Kungenzeka ukuba uya kuziva unomdla wangaphakathi wokumfumana kwakhona ukuze uvuselele ubulili bakho.
Uphawu lwephupha «isambrela» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokujonga ukutolika ngokwasemoyeni kwephupha, akunamsebenzi nokuba lalisebenzela ntoni: Nokuba lalisebenza njengokuzikhusela elangeni okanye emvuleni akubalulekanga kuhlalutyo oludlulayo. Ngokubanzi apha kuthetha amandla okanye uphawu lwesimo.